Lix Milyan Oo kiintaal Oo Deeq Calafka Xoolaha ah - Cakaara News
Jigjiga(CN) jamce, 5ta February 2016, Mashruuc ujeedadiisu tahay iibinta iyo rarista lix milyan oo kiintaal oo calafka xoolaha ah islamarkaana iskudubaridkiisa uu masuul kayahay Xafiiska Xoolaha iyo Horumarinta Reer miyiga DDSI ayaa loogu deeqay bulshada xooladhaqatada ah ee kunool Gobolka sitti.
Calafkan xoolaha iyo raridiisa ayay kubaxday maaliyad dhan 30 milyan oo birr maadaama ay gobolka soo food saartay abaar ay keentay isbadalka saamaynta cimilada aduunka. waxaana loo qaybinayaa goobaha ay abaartu saamaysay ee ka katirsan gobolkaasi iyadoo tirada xoolaha nool ee gobolka sitti lagu qiyaasay 4.5 milyan. Waxaana wakhti xaadirkan kasocota gobolka qaybinta calafkan sida uu noo sheegay wasiirka xafiiska xoolaha iyo horumarinta reer miyiga DDSI mudane Cabdinuur Colow Axmed
Hadaba calafkan xoolaha ayaa lagu qaaday gaadiid dhan 300 oo gaadhi oo kuwa xamuulka ah islamarkaana intoodii badnayd ay gaadhsiyeen goobihii loogu talagalay.
Sikastaba ha ahaatee waxaa xusid mudan in calafkan xoolaha laga gaday iskaashatooyin deegaanka ah sida iskaashatada wadani iyo kulmiye oo mudo gaaban gudaheed beeraha jiinka wabiga shabeele gaar ahaan beer-caano kasoo saaray calaf xoolo oo intaa dhan iyadoo ay wali jiraan beeralay badan oo deegaanka ah oo beeratay calafkan xoolaha iyo beero xafiisku kuhawlan yahay meesha hada kahor deegaanada kale ee dalka aan kasoo iibsan jiray calafka xoolaha.